५ नं. प्रदेश अहिलेसम्म मुक्त - Pradesh Today
Homebreaking-news५ नं. प्रदेश अहिलेसम्म मुक्त
प्रदेशमा कोरोना प्रभाव …
दाङ, १७ बैशाख ।
प्रदेश नं. ५ मा अहिलेसम्म कोरोनाका संक्रमितहरू फेला परेका छैनन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा परिक्षण भएका सबै रिपोर्टहरू नेगेटिभ आएका छन् । यसलाई आधार बनाउने हो भने दाङसहित प्रदेश नं. ५ कोरोना भाइरसबाट मुक्तजस्तै देखिएको छ ।
कोरोना भाइरसको आशंकामा करिब तीन हजारजनामा गरिएको जाँचमा अहिलेसम्म सबैजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिनुले यो प्रदेश अहिलेसम्मको अवस्थामा सुरक्षित भएको आँकलन छ । प्रदेशमा ३ हजार ५ सय २८ जनामा परिक्षणा गरिएको छ ।
जसमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रदेश नं. ५ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा विनोद गिरीले बताए । उनले १२ हजारभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसेको बताए ।
जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङका अनुसार दाङमा १ सय ८२ जनाको आरडिटी रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको हो ।
जिल्लामा कोरोनाका आशंकामा जाँच गराउनेको संख्या १ सय ८२ पुगेको हो । संक्रमण फैलिन नदिनका लागि क्वारेन्टाईन र आईसोलेसन वार्डमा राखिएका जिल्लाका १० वटै पालिकाका बिरामीहरूको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको छ ।
जसमध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका २८ जना व्यक्तिहरूको आरडिटी परिक्षण गरिएको छ । परिक्षण गरिएका सबै व्यक्तिहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी कोरोनाका आशंकामा क्वारेन्टाईन र आईसोलेसन बेडमा राखी उपचार गराईएका ३ सय ८८ जनामध्ये २ सय ५१ जना उपचारपछि फर्किएका छन् ।
बाँकी १ सय २२ जना क्वारेन्टाईनमा उपचाररत रहेका छन् भने १५ जना आईसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्
। उपचार गरिएका कुनैपनि व्यक्तिको रिपोर्ट पोजेटिभ नदेखिएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकाले जिल्लामा जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरूसमेत भईरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ ।
गाउँघरमा सचेतना फैलाउने, माक्स वितरण गर्ने, होम क्वारेन्टाईनमा बसाउने लगायतका गतिविधिहरूसमेत भईरहेको छ । साथै विभिन्न स्थानहरूमा स्वास्थ्य परिक्षणका लागि हेल्थ डेस्कसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।
यस्तै कोरोनाको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्था, समस्याको बारेमा जानकारी संकलन गर्नका लागि मोवाइल आरआरटी सेवासमेत सञ्चालन गरिएको छ । त्यसैगरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमद्वारा कोरोना सचेतनाका बारेमा सूचना तथा जानकारीहरू सम्पे्रषण गर्ने कार्यसमेत भईरहेको छ ।
तुलसीपुरमा ईसिवी तालिम सञ्चालन
यसैबीच कोरोना भाइरस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि तुलसीपुर उपमहानगरका विभिन्न स्थानहरूमा ईसिवी तालिम सञ्चालन हुने भएको छ ।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्यको समन्वयमा यस क्षेत्रका स्वास्थ्य सरोकारवाला, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूलाई तालिम दिन लागिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक विमल केसीले जानकारी दिए ।
उनले उपमहानगरका १९ वटै वडामा एकदिने तालिम सञ्चालन हुने बताए । कोरोना भाइरस जोखिम न्यूनीकरणका अपनाउनु पर्ने सावधानी, आपतकालिन अवस्थामा हुनसक्ने जोखिम र सावधानीका विषयमा प्रशिक्षण गराइने बताए ।
यस्तै सेनेटाईजर उत्पादनसम्बन्धी दुईदिने तालिम समेत सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । यसरी उत्पादन गरिएका सेनिटाईजरहरू निःशुल्क उपलब्ध गराईने समेत उनले बताए ।